१ सय बढी कम्पनीको शेयरमुल्यमा गिरावट, कारोबार रकम कति ? – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १५:१८ Basanta Khanal	0 Comments	share market
कारोबारको दोस्रो दिन (सोमबार) कारोबारको तेस्रो घण्टामा नेप्से परिसुचक ८.५४ अंकले बढेको छ । कारोबार सुरु भएको तीन घण्टा बित्दाँ परिसुचक ८.५४ अंकले उकालो लागेर २९८९.१६ को बिन्दुमा पुगेको छ । तीन घण्टाको अवधिमा कारोबारमा आएका २१८ ओटा कम्पनीको ८५ हजार ८८६ पटकको कारोबारमा २ करोड ९८ लाख ४ हजार ४१३ कित्ता शेयरको रू ९ अर्ब ४४ करोड बराबरको कारोबार भएको छ । आज २१८ कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ । जसमध्ये ७६ कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने कम्पनीको १०१ शेयरमूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको मूल्य स्थीर रहेको छ ।
← ५२ लाख ८० हजार कित्ता आईपीओ निस्काशन गर्दै (कुन कम्पनी र कहिले ?)
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – ०५ साउन २०७८ मंगलवारको राशिफल पढौं →
‘राष्ट्रपतिलाई तपाई भन्ने समेतको सभ्यता कांग्रेसमा रहेनछ’- केपी शर्मा ओली
२८ माघ २०७७, बुधबार १७:०२ Basanta Khanal	0